အနုပညာလောကသားတွေကြား ဂယက်ထသွားတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး အားပေးမှုတွေနဲ့ရပ်တည်ပြောလာခဲ့တဲ့ အောင်ရဲလင်း – Cele Top Stars
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်မင်းသားအောင်ရဲလင်းကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ အောင်ရဲလင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ထိပ်တန်းမင်းသားတွေထဲက တစ်ယောက်အပါဝင်ဖြစ်သူ မင်းသားတ စ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ အောင်ရဲလင်းကတော့ ဗီဒီယိုခေတ်ရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီး တည်ကြည်ခန့်ညားကာ ကြည့်ကောင်းသူမို့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းတွေကို ဖမ်းစားနိုင်သူ တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါ ဘူးနော်.။
အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ကျဲနေသူ အောင်ရဲလင်းကတော့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ တင်လာတဲ့ အခါတိုင်းမှာ လူတိုင်းရဲ့ ပါးစပ်ဖျားကတော့ ပြောစမှတ်တွင်အောင် ကြည့်ကောင်းကာ ခန့်ငြားမှုတွေ ပြည့်နေသူပါ.။ ဇန်နဝါရီလအတွင်း အနုပညာလောကသားတွေကြား ဂယက်ထသွားခဲ့တဲ့သတင်း တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောင်ရဲလင်းက “Stay Strong Fella! #KeepYourHeadsHigh #ChaintKKo” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာ ခဲ့ပါတယ်.။
တော်ရုံဝင်မပြောကာ အေးဆေးစွာပဲ နေတတ်သူ အောင်ရဲလင်းကပါ အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကိုအတွက် အားပေးမှုတွေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။
ခဈြပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျမငျးသားအောငျရဲလငျးကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ အောငျရဲလငျးကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး ထိပျတနျးမငျးသားတှထေဲက တဈယောကျအပါဝငျဖွဈသူ မငျးသားတ ဈလကျပဲဖွဈပါတယျနျော။
ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျသူ အောငျရဲလငျးကတော့ ဗီဒီယိုခတျေရဲ့ ဒိတျဒိတျကြဲ မငျးသားတဈလကျဖွဈပွီး တညျကွညျခနျ့ညားကာ ကွညျ့ကောငျးသူမို့ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးတှကေို ဖမျးစားနိုငျသူ တဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါ ဘူးနျော.။
အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ ကြဲနသေူ အောငျရဲလငျးကတော့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပျတှေ တငျလာတဲ့ အခါတိုငျးမှာ လူတိုငျးရဲ့ ပါးစပျဖြားကတော့ ပွောစမှတျတှငျအောငျ ကွညျ့ကောငျးကာ ခနျ့ငွားမှုတှေ ပွညျ့နသေူပါ.။ ဇနျနဝါရီလအတှငျး အနုပညာလောကသားတှကွေား ဂယကျထသှားခဲ့တဲ့သတငျး တဈပုဒျဖွဈတဲ့ အဆိုတျော ခွိမျ့ကကေိုရဲ့ ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး အောငျရဲလငျးက “Stay Strong Fella! #KeepYourHeadsHigh #ChaintKKo” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာ ခဲ့ပါတယျ.။
တျောရုံဝငျမပွောကာ အေးဆေးစှာပဲ နတေတျသူ အောငျရဲလငျးကပါ အဆိုတျော ခွိမျ့ကကေိုအတှကျ အားပေးမှုတှနေဲ့ ရပျတညျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော.။ ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ ခဈြပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော…။